Nezvedu - Dongguan Taiyang Textile Chemicals Co, Ltd.
Yakagadzwa muna1999, TY inogadzira yakabatanidzwa yemakemikari ekugadzira bhizinesi ine zvimedu zvekudhinda machira ekushongedza, aqua bond; R&D, kugadzira, kutengesa kushambidza nguo uye kupfeka, yekushambidza mumiriri uye nezvimwe.
TY inemidziyo yakarongedzwa midziyo yekugadzirira yeaxiiaries, senge yekuita keturu 23, mitsimba yekuyedza 251 seti, zviyero zvekuyera 8 seti. Taiyang Textile Kune machira emapaini uye anokamhina zvigadzirwa, TY yakaisa nzvimbo kana madhipatimendi anoita sekutsvagisa & kuvandudza, kuyedza zvigadzirwa, kugadzira, kushambadzira, nyaya dzekutungamira, nezvimwe .. Kune vanamakanika manomwe (2 avo ndevakuru mainjiniya), uye makumi maviri neviri vanogadzira vashandi.
Makuru mabhizinesi ane akatevedzana emachira ekudhinda machira: machira anodhinda akasimbisa kuomerera, chena kunamatira, nylon adhesive uye akajeka kunamatira, etc. Textile makemikari mumiriri wekuteedzera akaputirwa & yakarukwa post-kudhaya & kupera.
TY yagara ichiomerera kune bhizinesi chinangwa cheKutendeseka uye Kuvimbika, Mhoro Yekutanga, Yekubatsira Kwevatengi Kutanga, uye inonyatsotevedzera chinangwa chekushandisa manejimendi bhizinesi, kuitira kuti chengetedzo zvigadzirwa Mukumira uye zvakavimbika mhando dzakasiyana siyana sarudzo, JIT kuendesa, kukurumidza mushure-yekutengesa sevhisi TY yagara ichipa yakanyanya kukoshesa kana zvido, kusimudzira kwakawanda pamwe nekubudirira pamwe nevatengi, kutsvaga kwakakwana basa rehunyanzvi uye kusangana nezvinodiwa zvepamusoro zvekugutsikana kwevatengi.
Kushanda kunoitika kunyatsotevedzera IS09000 2000 uye IS014000 International mhando Assurance system. Zvigadzirwa zvakaedzwa neNational Textile kuyedza Center zvakazara mukuwirirana neiyo GB / T18401 ~ 2003 National Textile Safety technical Code.
Zvigadzirwa zvinotungamira zvakakamurwa kuva akateedzana machira emapaini, akadai senge wakabviswa simba, silicone mafuta, isina-ironing ine crease yemahara, crumple yemahara, yakanyorova mafuta, kudhirowa uye kupedzisa, kugadzirisa uye kubvarura, kugeza, nezvimwe, Series yemachira machira , deoiling, ngura kubviswa, simbi deoling, lacquer kubviswa, phosphating.
Bazi redu reVietnam rakavhurwa muna 2019, Kune vashandi vana parizvino.
Kero: No.42 / DC62, NA1 Road, Yuexin Industrial Estate, Shunjiao, Shunan County, Pingyang Province, Vietnam
Kusviba uye mamwe maratidziro ekurapa ekushandiswa anoshandiswa kune machira emachira uye / kana mabhizinesi esoftware.